Jinyun Jewelry yasekwa ngowe-2006 inkampani yethu ibekwe e Guangzhou, China. Siya ezikhethekileyo Stainless Jewelry Ihowuliseyili ngu B2B kwaye waba neminyaka engaphezu kwama-10 oshishino kulo. Ukuza kuthi ga ngoku, siye ibiba nabathengisi ezingaphezu kwama-300 ukususela ngoko ukuba indlela yentlawulo kakhulu elula, amaxabiso zibhetele iinkonzo kubathengi bethu.
Kukho ngaphezu kwama-100,000 loyilo ezahlukahlukeneyo uyakwazi ukufumana kwi website yethu, www.julongsteeljewelry.com . Zonke iindlela ezintsha ziya kuhlaziywa yi veki nganye ukuze ngakumbi kunokuba iimveliso 2000pcs entsha. Products ayile iintlobo zilangazelelwa kakhulu kwaye banelise ngokupheleleyo kunye nabathengi ezininzi ezahlukeneyo ukusuka iimfuno kumazwe awahlukeneyo.
Siye ngaphezulu kwe 10,000 ilungu ebhalisiweyo izinto ezivela kulo lonke ihlabathi, babengayi ngokuqhelekileyo ukwenza umyalelo rhoqo apho wayeza kuzisa lula amaninzi ukususela abathengi bethu kufuneka kuphela malunga 3-15 iintsuku ukufumana impahla yabo-stock kwakhona. Sinikeza izinto zamaxabiso aphantsi kakhulu kunye nendlela intlawulo ekhawulezileyo elula, ezifana Pay-Pal, transfer Bank, union Western kunye Money gram.
Ukuba unomdla, nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi.